Swissport dia manendry an'i Warwick Brady ho filoha & CEO
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Swissport dia manendry an'i Warwick Brady ho filoha & CEO
Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Soisa • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Warwick Brady no tale jeneralin'ny Esken Limited, Stobart Group teo aloha, orinasa iray misahana ny fotodrafitrasa anglisy, fiaramanidina ary angovo misy fiasa any UK sy Irlandy.
Warwick Brady dia nandimby an'i Christoph Mueller, izay niasa ho CEO vonjimaika nanomboka ny 1 Janoary 2021
Christoph Mueller dia ho lasa filohan'ny filankevi-pitantanana
Warwick Brady dia mandray ny andraikitry ny CEO amin'ny lohataona 2021
Ny filankevi-pitantanan'ny Swissport International AG nanendry an'i Warwick Brady ho filoha & Tale jeneralin'ny orinasa vaovao. Izy no hisolo toerana an'i Christoph Mueller, izay nitana ny andraikitry ny CEO nandritra ny fotoana nanendrena azy ho filankevi-pitantanana any Swissport tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa. Andriamatoa Brady dia hiditra ao amin'ny Board of Directors an'ny orinasa ihany koa.
Warwick Brady dia tale jeneralin'ny Esken Limited, Stobart Group teo aloha, orinasa iray misahana ny fotodrafitrasa, fiaramanidina ary angovo misy angovo any UK sy Irlandy. Izy no nanova ny Esken avy amin'ny kaomina ho orinasa iray mifantoka amin'ny fiaramanidina (seranam-piaramanidina, serivisy fiaramanidina, seranam-piaramanidina rezionaly) ary angovo azo havaozina. Ao anatin'ny famerenana amin'ny laoniny dia novonoiny soa aman-tsara ny M&A, ny fihodinan'ny asa, ny famatsiam-bola sarotra ary ny fifantohana amin'ny paikadin'ny orinasa. Talohan'ny andraikitry ny CEO tao Esken, dia Chief Operating Officer tao EasyJet nandritra ny valo taona teo ho eo izy ary tao amin'ny ekipa mpitarika izay nanova ny zotram-piaramanidina ho orinasa FTSE 100.
Andriamatoa Brady dia mitondra traikefa amin'ny fitantanana iraisam-pirenena, anisan'izany ny andraikitra ambony ao Eropa, India ary Azia. Ny anjara asany teo aloha dia misy ny andraikitra amin'ny maha Chief Executive Executive an'ny Mandala Airlines any Indonezia, Chief Operating Officer ao amin'ny Air Deccan / Kingfisher any India ary ny Deputy Deputy Operations Director ao amin'ny Ryanair plc. Teo aloha dia nitana ny toeran'ny birao tao amin'ny Airline Group sy NATS, mpamatsy habakabaka UK ary izy no CEO lefitra an'ny Buzz. Andriamatoa Brady dia tale tsy mpanatanteraka ao amin'ny vondrona voalohany. Manana MBA izy ary mpanamory fiaramanidina voaofana.
"Miaraka amin'ny traikefany amin'ny indostria sy rakitsoratra efa voaporofo tamin'ny fanovana ny fikambanana, ny nomerika ary ny fihodinana niasa, Warwick no CEO tsara indrindra hitarika soa aman-tsara an'i Swissport, ary hitondra azy amin'ny tena faniriana, satria mivoaka avy amin'ny areti-mandringana Covid-19 ity tontolo ity sy ny sehatry ny fiaramanidina. ", Hoy i David Siegel, filohan'ny talen'ny talen'ny talen'ny Swissport International AG. “Manantena izahay fa ny fanarenana ny tsena dia hanolotra fanamby vitsivitsy amintsika nefa koa hanana fotoana stratejika lehibe. Matoky aho fa i Warwick amin'ny maha CEO sy Christoph ho filoham-pirenena ho avy antsika dia hitondra an'i Swissport any amin'ny ambaratonga manaraka ary hametraka ny orinasa ho mpiara-miasa voalohany amin'ireo orinasam-pitaterana manerantany. ”
Christoph Mueller nanampy hoe: "Faly aho mahita an'i Warwick miditra sy mitarika ny ekipa mpanatanteraka ary manantena ny hiara-hiasa aminy hamoaka ny tsara indrindra amin'ny orinasanay. Tao amin'ny Swissport, nanomboka niasa tamin'ny fanovana ny orinasa ho fikambanana mahomby kokoa izahay, mailaka ary mahay nomerika kokoa. Tao amin'ny EasyJet, i Warwick dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fandraisana andraikitra marobe natao hitadiavana an'izany, ary izy no handray anjara lehibe amin'ny fitondrana ny fanovana an'i Swissport. ”
Warwick Brady dia nilaza fa: "Faly aho, ary voninahitra fa angatahina hitarika an'i Swissport amin'ny fotoana mbola tsy nisy toy izany. Misy ny asa mafy miandry, fa ny mety ho Swissport sy ny fomba fijery antonony tsena dia azo antoka fa hahatonga an'io dia mahafinaritra io. Hampiasantsika ny lova lehibe Swissport amin'ny fanomezana zotram-piaramanidina manerantany miaraka amin'ny serivisy an-tanety sy ny fikirakirana entana izay azon'izy ireo ianteherana am-pahatokisana. Ary hanafainganana ny fanovàna efa an-dàlam-be any Swissport ho lasa fikambanana mailaka, manavao ary mahomby kokoa izahay ary mpiara-miasa. ”